Retail Franchises yeKutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Retail Franchise
Retail Yekupedzisira Franchises
Chii chinonzi Rent2Buy? Isu tiri FCA yakabvumidzwa yakawanda-mhando, mhando yedhijitari yekutengesa uye yemari masevhisi, tichivavarira kupa vatengi vedu ...
Kuziva Express Zvichida yakanakisa B2B franchise muUK Kubudirira kutengeserana kubva 1979, yapfuura muhwina weyakauchiwa bfa Franchise ...
Iyo indasitiri yekutengesa yakagara iri indasitiri yakakura asiwo indasitiri yakasiyana kwazvo nekuti vezvitoro vanogona kuenda kubva kupfeko kuenda kune zvigadzirwa zvekudya uye zvese zviri pakati.
Iye zvino isu tichanyora dzimwe nhamba nezvekukuchangobva kukura iyo indasitiri yekushambadzira yaona pasi rese. Zvakare izvi zvinofanirwa netariro kubatsira chero munhu anotarisa mukati kuti atenge franchise mukati mechitengesi chikamu kuti awone zvikamu zvese kukura mumakore apfuura uyezve nekufungidzira kutsva kwemakore anotevera.
Muna 2019 UK yakashamiswa nekutengesa kutengesa kunosvika £ 394 bhirioni yeBritain mapaundi.
Kutengesa kwepasi rese vanofungidzirwa kuti vangangoita zviuru makumi matatu emadhora emadhora ekuAmerica pakazosvika 30, kubva pamadhora makumi maviri nematatu emadhora ekuAmerica muna 2023
Parizvino kune anopfuura makumi matatu ezviuru zviuru zvitatu muzvitoro muUK yose
Aya manhamba anoratidza chii kune rejenji chikamu?
Nhamba idzi dzinoratidza kuti chikamu chevatengesi chiri kuwedzera kwete muUS neUK, asi pasirese. Retail sekisheni chikamu icho chiri zvikuru mukukura kuri kuda
Mukuwedzera, iri kukura gore rega rega uye iri kuratidza isina chiratidzo chekukura nekukurumidza uye ichipararira ichiderera. Aya manhamba anogona kupa zano ikozvino inogona kunge iri nguva chaiyo yekudyara mune ino chikamu chikuru. Kana iwe usina chokwadi chekuti ndeipi yauchasarudza asi ini ndinokurudzira kuti utarise zvakanaka kuburikidza nechitoro chedu chekutengesa franchise kuti uwane mukana wako wekurota franchise.
Mhedziso yakatenderedza indasitiri yekutengesa.
Pakazere indasitiri yekutengesa iri kungoratidza kukura kwakakura. Zvakare inogona kuve iri nguva yakanaka yekutarisa mune tekinoroji yakabatana nema franchise mukati mechitengesi chikamu. Kubva izvo zvakaratidza kukura kukuru mumakore gumi apfuura nekuti vanhu vari kunyanya kuvimba nehunyanzvi hwekuwana zvigadzirwa zvavo iye zvino kwete ivo. Zvakare kana usina chokwadi chekuti iwe unoda retairi yekutengesa kana yavo kwete kapu yako yetii. Ini ndinokurudzira kuti utarise dhairekitori redu sezvo Franchiseek iri dhairekitori yakakura kwazvo yefrigise inopa akawanda mafurati ekutengesa kugutsa zvaunoda.